Tag: maalinta hooyooyinka | Martech Zone
Tag: maalinta hooyooyinka
Maalinta Hooyada Farxada Leh!
Sunday, May 13, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Maalinta Hooyada waa maalinta 3-aad ee ugu weyn ee fasaxa tafaariiqda iyadoo in ka badan $ 22.3 bilyan lagu bixiyay Mareykanka oo keliya. 35.5% dadka Mareykanka ah waxay iibsadaan dahabka Maalinta Hooyada, oo ah koror sanadle ah 6.8% sanadkii. Xaqiiqdii, guud ahaan qarashgareynta hadiyadaha Maalinta Hooyada waxaa lafilayaa inay kordhaan 10.5% sanadki. Weligaa la yaab ma leh sababta Maalinta Hooyada ay uga caansan tahay Maalinta Aabbaha? Ma ogtahay in Maalinta Hooyada ay ahayd maalin fasax qaran inbadan